Home Wararka Deyn “Cafinta” Wasiir BB ee Xelligaan oo Dalka Dumin Doonta. Waddani Nala...
Deyn “Cafinta” Wasiir BB ee Xelligaan oo Dalka Dumin Doonta. Waddani Nala arag.
Qeexid: Deyncafin maaha waxa Somaliya loo wado ee waa deyn khafiifin. “Deyn cafin” waa eray khalad ah oo uu Wasiir Byle isticmaalo si uu daka u marin habaabiyo, balsa aan ba sidaas ku wadno qoraalkan.
Taariikhda waxaa loo qoraa in wax laga barto oo aan lagu celin, waana sababta loo akhriyo oo loogu celceliyo akhrinteeda iyo is xusuusinteeda inay aadanuhu ka digtoonaadaan waddooyinkii khaldan ee la qaaday. Dawladda Somaliya, gaar ahaan wasiirkeeda Maaliyadda Dr Cabdiraxman Beyle waxaa cad inuusan wax cashar ah ka baran Karin dhacdooyinkii soo dhacay iyo dabinnadii ay ku dhaceen waddo naga horeeyey. Dadka dhaliilaa wasiirka waxay ku sheegaaan inuu yahay qof aan runta ka sheegin arrimaha dhaqaalaha iyo dhibaatooyinka uu abuurayo isagoo dhaafsiisanayo waxyaabo yaryar oo dhadhammo ah, sida dhulalal iyo guryo uu ka kala dhisanayo Hargeysa iyo Boorama iyo kuwa uu ka gadanayo mareykanka.
Waddadaan deyn cafinta eeuu wasiirka ummada ku waalay waxaa horay ugu jabay dalal dhowr ah oo nala mid ah sida Angola iyo Cameruun. Dalka Angola markii deynta laga cafinayey si qoorta loogu geliyo deyn ka weyn tii hore waxaa lagu lahaa $5.9 Bilyan, lacagaha la siin jiray xelligaasn waxay ahaayeen deeqo oo aan wax dulsaar iyo soo celin toona looga rabin, laakiin markii deynta laga cafiyey waxaa is taagay dhammaan mucaawinooyinkii la siin jiray si u talagal ahna waxaa loogu wada ballaqay albaada deyn cusub maantana dalkaas waxaa uu ku dhowyahay in isaga oo dhan rahaamad lala wareego oo waxaa lagu leeyahay $47.5 Bilyan.Wuxuuna ka mid yahay dalalka soo saara shidaalka.
Haddaba guddiga maaliyadda ee barlamaanka iyo xildhibannada barlamaanka waxaa haboon inay u yeeraan wasiir Beyle, laakiin ay u yeertaan dad dhaqaaleyahan ah oo su’aalaha saxda weydiin kara wasiirka iyagoo ka tusaale qaadayana waxa hadda ka socda aqalka la siman ee Mareykanka. Aqalkaas waxay u yeertaan khubaro su’aalo weydiiya madaxda hay’adaha iyagoo barlmanka iyo shacbigaba ay dhageysanyaan. Waa maxay danta hadda ku jirtaa deyn cafinta, haddiisa la cafiyaa yaa dalka u ballanqaadaya inuusan qaadaneynin deyn ka weyn tan hadda lagu leeyahay, yaasa caddeynaya sida deyntaas la soo qaadi loo maamulayo haddiiba la soo qaado?
Haddaba Barlamanka ha qaateen doorkaas oo waxa bilowga ah ee beryahan ka muuqda si fiican ha u guda galeen dalkaan mas’uuliyad ay kutubka ugu dhaarteen ayaa ka saaran waxaana la hubaa inaysan dhaartaas gafeyn oo rabbi ku abaalmarin doono wixii ay hortiisa ka ballan qaadeen sida ay u fuliyaan.
Dhinaca kale Somalidu ha barato cidda uu yahay Cabdiraxmaan Beyle. Wasiirka waa shakhsi aan rabbi uga cabsan dhaartii uu maray oo intaas been u akhriya shacbiga isagoo mar waliba hareer mara hannaanka maamul wanaagga ay wasaaradda Maaliyadda u baahan tahay. Lacago fara badan ayuu is weydaariyaa wasiirka isagoo aad mooddo inaysan jirin cid wax ka weydiin karta waayo ciddi hadli lahayd waxaa agtaalla boorso doolar xermo xermo ah ka buuxo sida RW Kheyre oo kale iyo xubno barlamanka ka mid ah oo xogaa markii ay baahdaan afdheeri lagu yaqaanno inta qaadka helayaan, ijaarkana laga qaabilo iska aamusaya.
Iyadoo la tixraacayo maareynta maaliyadeed ayuu wasiir Beyle sida halka hoose ka muuqataa ay muujineysaa isagoo amrayo $ 5 milyan in lagu wareejiyo xisaab-hoosaad ku saleysan taleefan uu u diray Guddoomiyaha Bankiga Dhexe. Waa habka ay dowladdaan u maamusho maaliyada dalka .
Isku soo xoori, haddii ammaanka sidaan yahay oo la soo gaaray in xildhibaannada dariiqa looga daadiyo gawaaridooda, oo maareynta maliyadda sidaan tahay, oo siyaasadda sidaan tahay, oo fedraalkii burbur ku socdo, oo dowlad goboleedyadaii ay ku dhow yihiin inay mid waliba nolosheeda raadsato, Somaliland lagu hayo cunaqabteyn iyo sii eryid maxaa haray oo la isku haysataa? Bal wadani kaligaa isu jawaab mucaarid iyo muxaafid midkaa tahayba.
Waxaa hoosta la socda macluumaad tweeter ah oo ay khubaro Somali iyo ajnabiba leh is dhaafsadeen kuwaas oo si fican uga digaya dhibaatada ay Somaliya ula soo socoto deyn cafinta iyo habka maamul xumo ee wasiirka.
Wasiirka oo markii loo sheegay khaldaadka maamul ee uu leeyahay isaga iyo dhibaatada deyncafinta ay soo wadato ayaa qoray twitterkan xanaaqa ka muuqdi halkii uu iska sixi lahaa garowshiiyana ka muujin lahaa: “Waa wax laga xumaado in dhowr qof oo naysayar ah (maya yiraahda wax waliba) ay doonayaan inay hor istaagaan taageerada caalamiga ah ee cafinta Soomaaliya ee deynta ah iyagoo si aan habooneyn u soo bandhigaya email-ka sharci darrada ah . Nidaamkayaga ‘PFM’ waa mid adag, daah furnaan & horumar ku sameynaya maaliyada. Waxaa naga go’an dib-u-habayntayada.
Khubaro dhowr ayaa wasiirka uga digay in xataa lacagta ay Norwey naga bixineysaa la soo marsiin doono Bangiga Addunka kadibna ay deyn isubadali doonto oo dalka lagu yeelan doono. Haddaba waa maxay danta laga leeyahay in lacago hadda deeq ah in deyn loo rogo danta kaliya waa wasiirka oo lacagahaas qeyb u gaar ah ku leh haddii uu fuliyo mashruucaas khiyaanada ah.
Sidoo kale Khabiirkan leh twitterka waxaa uu leeyahay mar haddii lacagta Norwey lagu wareejiyo Bangiga adduunka waxay noqoneysaa deyn cusub oo leh shuruudo cusub, haddaba maxaa loogu baahan yahay in la galo deymo aan loo baahneyn oo hadda deeqo wada ah.
Haddaba Barlamanka maanta ayey haystaan fursad oo ay ku joojin karaan dhammaan arrimaha deyn cafinta ilaa la helo dowlad daah furan oo ay barlamanka guddiyadooda maaliyadda, kuwa horumarinta dalka iyo guddiga xiriirka caalamiga ah ka qeyb qataan iyagoo fahmaya tallaabo kasta oo la qaadayo si dalka aan culeys weyn oo musqtabalka dabar adag ku giiya loo gelin.
Sidoo kale waxaa 18ka Diseember 2019 shiraya guddiga maamulka deynkhafiifinta Somaliya ee IMF iyo Bankiga aduunka waa in barlamnak uu u diraa dhambaal cad oo arrintaan ku saabsan si looga hortago khaterta ka soo socota. Dalka waxaa uu leeyahay khubaro madax bannaan oo an ahayn kuwa ay dowladdu wad wadato, waxaa kaloo la heli karaa khubaro calami ah oo sifiica u daaraseyn karta arrimahaan. Barlmanka ha guto waajibaadkiisa.